Linus Torvalds haidi kuve inofungidzirwa | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mekuburitswa kwe kernel 4.16, nguva yekushandurwa yakavhurwa yekuvandudza iyo inotevera vhezheni. Iyi nguva yekushandura kana kubatanidza hwindo yakavharwa uye iine iro rakabvumirwa vhezheni yekernel 4.17 yaburitswa Iyo inotevera kernel iyo inosvika pamakomputa edu gore rino. Zvisinei, Linus Torvalds, musiki wayo uye mutungamiri weprojekiti, Haasi kufara nenhamba dziri kuwanikwa neshanduro dzekupedzisira dzenzvimbo uye inogona kuchinjika munguva pfupi inotevera.Linux Torvalds yakataura kuburikidza runyorwa rwekutumira yemukono iyo haidi kufungidzira uye kuti inotevera vhezheni inogona kunge iri yechishanu kana pamwe kwete. Ichokwadi ndechekuti panguva ino ichave iri vhezheni 4.17 yekernel, iyo imwe nhanho yakasvika mukati meGit repository uye icho chinhu chinoshamisa.
Kune mamwe ese, iyo nyowani vhezheni yekernel haina kuburitsa chero nhaurwa huru uye ichiri shanduro yekuchengetedza. Mune ino vhezheni, bugs dzakaonekwa dzakagadziriswa uye mapuratifomu ehurdware akange asisina basa akabviswa Rondedzero yemapuratifomu akabviswa ndeye blackfin, cris, frv, m32r, metag, mn10300, mamaki uye tile. Kune rimwe divi, iyo nds32 chikuva chakawedzerwa kana kunzi zvakare RISC Andes Technology 32-0bit kuvaka.
Iyo kodhi yeiyi kernel yatovepo pa kernel.orgNekudaro, hazvikurudzirwe kuti uishandise pakugadzira kana makomputa akasimba sezvo kernel iri kusagadzikana. Asi chinotyisa zvikuru mazwi aLinus Torvalds, mutungamiri weprojekiti. Mazwi mashoma anokonzeresa shanduko huru muiyo kernel kuverenga uye mu ayo vagadziri vazhinji vanobvumirana naLinus Torvalds, sezvo nhamba dzeshanduro dzisinganzwisise pane kungoshandiswa sezita repakeji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds haidi kuve inofungidzirwa